Imali yokutshintsha Yen (JPY) Ukuze Rand (ZAR) bahlala zonaniso Forex
Amazinga Forex exchange oluhlaziyiweyo: 16/04/2021 15:23
Yen - Rand ixabiso ngoku kwi zonaniso Forex ngelo 16 UTshazimpuzi 2021
15:23:30 (Umyinge Forex uhlaziyo in seconds 59)
1 ZAR = 7.61 JPY
Yen ukuya Rand iboniswe kwi-Forex exchange. Ireyithi yokutshintshiselana nge-intanethi kunye notshintsho oluhlala rhoqo ukusuka kutshintshiselwano lwe-Forex. Ixesha elikhawulezayo le Yen ukuya Rand. Utshintsho ngaphakathi Yen ukuya Rand kwi-Forex inokujongwa kumaxesha ahlukeneyo.
Itshathi Forex yorhwebo Rand - Yen ubomi, 16 UTshazimpuzi 2021
Itshathi Forex yorhwebo Yen Ukuze Rand ubomi, 16 UTshazimpuzi 2021
Itshathi ye Yen ukuya Rand inqanaba lotshintsho kwi 16 UTshazimpuzi 2021 ilapha, kwiwebhusayithi yethu. Itshati ephezulu ephepheni kukubonwa kwembonakalo yotshintsho lwexabiso lotshintshiselwano. Khetha inqaku kwitshathi ukufumanisa eyona nqanaba lokutshintshiselana ngexesha elifanelekileyo. I Yen ihlala ihlaziywa rhoqo, njengoko indawo yethu ifumana idatha kwi-Forex.
Tshintshela Yen Ukuze Rand Yen Ukuze Rand Imali yokutshintsha Yen Ukuze Rand imbali izinga lotshintshiselwano
Lokurhweba ngekhompyutha Yen (JPY) ukuba Rand ngelo xesha
Utshintsho lwexabiso lokutshintshwa linokujongwa umzuzu ngamnye. Ukutshintsha kwemizuzu kwi Yen ukuya kwi Rand - -0.0000 ZAR. Amanqanaba Yen ukuya kwi Rand yonke imzuzu ibonisiwe kwitafile kweli phepha. Jonga idatha yokutshintsha kwemali kwimizuzu eli-10 kwitheyibhile kweli phepha.
Lokurhweba ngekhompyutha Yen (JPY) ukuba Rand urhwebo lilixa lokugqibela
Qho ngeyure silanda inqanaba lotshintshiselwano. utshintsho lweyure kwi Yen ukuya kwi Rand - 0.0000 ZAR. Ireyithi yokutshintsha kwenani ngalinye Yen ukuya kwi Rand kwitheyibhile iiyure ezili-10. Amaxabiso a Yen ngeyure nganye zibekwe etafileni ukuze kube lula ukubona umahluko.
Lokurhweba ngekhompyutha Yen (JPY) ukuba Rand Intsingiselo yanamhlanje 16 UTshazimpuzi 2021
15:23 14:23 13:23 12:23 11:22 10:22 09:07 07:52 06:52 05:52